မက္ကဆီကိုနိုင်ငံက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး သဘောတူညီချက်ကို လက်ခံကျင့်သုံးမည်ဟု အမေရိကန် သမ္မတထရ?? - Yangon Media Group
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး သဘောတူညီချက်ကို လက်ခံကျင့်သုံးမည်ဟု အမေရိကန် သမ္မတထရ??
တောင်အာဖရိက သမ္မတအား ရန်ပုံငွေ အလွဲသုံးစားပြုထားကြောင်း စွပ်စွဲပြောဆို
ကျောင်းသားများကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြုမှုအတွက် စင်ကာပူ NU တက္ကသိုလ် ကထိကဆရာတစ်ဦးကို တရားစွဲ
အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဂျွန်ဘော်လ်တန် ဂျပန်နှင့် တောင်ကိုရီးယားသို့ ထွက်ခွာ
ဇွန် ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် သမ္မတထရန့်က ”မက္ကဆီကိုဟာ တော်တော်လေးကြိုးစားမှာပါ။ တကယ်လို့ သူတို့အဲဒါကိုလုပ်မယ် ဆိုရင် အမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုကြားက အောင်မြင်တဲ့သဘောတူညီ ချက်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ”ဟု တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ သမ္မတ ထရန့်အစိုးရက ယင်းသဘောတူညီချက်သည် လူဝင်မှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး စတီဖင်မနူချင်က ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဖူကူအိုကာမြို့တွင် ပြုလုပ်နေသည့် ဂျီ-၂ဝ အစည်းအဝေးပြင်ပတွင် ရိုက်တာသတင်းဌာန၏မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည်ဖြေကြားထားသည်။
သို့သော် သမ္မတထရန့်သည် ယင်းသဘောတူညီချက်အသစ်ကို မက္ကဆီကိုနိုင်ငံက ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းမရှိပါက အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်အာဏာကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သတိပေးထားသည်။ သမ္မတထရန့်ကလည်း မက္ကဆီကိုအနေဖြင့် တရုတ်နှင့်ကုန်သွယ်ရေး စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် ထိခိုက်နေရသည့် အမေရိကန်လယ်သမားများထံမှ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်အမြားကို စတင်ဝယ်ယူတော့မည်ဟု တွစ်တာတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။ မက္ကဆီကို နိုင်ငံဘက်မှ ၎င်းင်းတို့၏သဘောတူညီချက်အတိုင်းလိုက်ပါလုပ်ဆောင် ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေ။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး သဘောတူညီချက်အရ ချမှတ်လိုက်သည့် ကန်-မက္ကဆီကို ပူးတွဲ ကြေညာချက်တွင် အမေရိကန်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များကို မက္ကဆီကိုဘက်မှ ဝယ်ယူမှုကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။
ပါကစ္စတန် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီး အသေခံ ဗုံးခွဲသမားတစ်ဦး၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ခြောက်ဦးသေဆုံး
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုတွင် စက်တင်ဘာလ၌ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန် ဆန္ဒပြတောင်းဆို
ရန်ကုန်တွင် ဆောက်လုပ်ဆဲ အိမ်ခန်းပေါင်း ၃ဝဝဝ ကျော် ကျန်ရှိ၊ လျှောက်ထားသူများကို တန်းစီဇယား??
မြောက်ဦးကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် စံနှုန်းပြည့်မီရန် ရေဝင်ရေထွက် စနစ်ကို ပြုပြင်မည်
သူဌေးတစ်ဦး လှူဒါန်းထားသည့် ကျပ်သိန်းထောင်ချီတန် ကျောက်စိမ်းနှစ်တုံးကို မြစ်ကြီးနားတွင် ?